ပိုးတွေ့လူနာကို အိမ်ပြန်လွှတ်ပြီး လူနာမိသားစုကို ပက်ပက်စက်စက်ပြောတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ဝန်ထမ်း - Zet Star
ပိုးတွေ့လူနာကို အိမ်ပြန်လွှတ်ပြီး လူနာမိသားစုကို ပက်ပက်စက်စက်ပြောတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ဝန်ထမ်း
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ.. ၁။ Positive လူနာအားအိမ်ပြန်လွှတ်ခြင်း ၂။ သတင်းအမှားပေး၍ ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာအား သိက္ခာချ၍ ထိခိုက်စေခြင်း ၃။ လူနာမိသားစုဝင်အား သိက္ခာချ၍ ပြောဆိုခြင်း။
ရန်ကုန်ဆေးရုံးကြီးက ၀၉၂၅၀၂၉… ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက လူနာမိသားစုဝင်ကိုသာ ဒီလို ပက်ပက်စက်စက် မပြောခဲ့ရင် positive လူနာအိမ်ပြန်လွှတ်တဲ့ကိစ္စက လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲသိရပါပြီ။ အရမ်းရိုင်းပါတယ်။ ငြင်းလို့မရပါ recording တွေရှိပါတယ်။
၁။ Positive လူနာအားအိမ်ပြန်လွှတ်ခြင်း
ညီမအမေက သွေးတိုး ဆီးချို ရင်ကြပ် နှင့် နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူနာပါ။ သူလည်ချောင်းနာပြီးအနံ့ပျောက်တာနဲ့ ရောဂါအခံရှိသူမို့စိုးရိမ်ရလို့ fever Clinic မသွားဘဲ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို တန်းသွားတာပါ။ဟိုမှာက ဟိုတစ်နေ့က အကိုတစ်ယောက်တင်တဲ့အတိုင်းအကုန် ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီး နေရာတောင်မရှိပါဘူး။ ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေ ။သူတို့ procedure အတိုင်းအကုန်လုပ်ပြီး ညီမအမေက လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့သူမို့။ မလိုရင်မလိုက်ပါနဲ့ လူတွေအရမ်းကြပ်နေလို့ပါဆိုတာနဲ့ လူနာစောင့်မလိုက်ပါဘူး။
၂၈ ရက်နေ့ရောက်တယ် ၂၉ swab ယူတယ်။ ၃၀ ရက်နေ့အဖြေသိပါတယ်။ POSITIVE ပါ။ ၃၀ ရက်နေ့ဘဲထပ်ပြီး swab ယူပါတယ်။ ၁ ရက်နေ့အဖြေသိတယ် NEGATIVE ပါ။ ၁ ရက်နေ့ဘဲဆေးရုံဆင်းလက်မှတ်ပေးပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ အောက်ကပုံက လက်မှတ်ပါ။ ၂ ရက်နေ့မှာ ဖုန်းတွေ တောက်လျှောက်လာပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ပါတယ်။ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊contact tracing လိုက်တဲ့အကိုရယ်၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကလူတွေ ဆက်ပါတယ်။
မြို့နယ်ကျန်းမာရေးကဆရာမလေးက “ညီမအမေ rapid test kit နဲ့စစ်တာ negative ထွက်ပြီး lab မှာစစ်တာ positive ထွက်လို့ ဖောင်ကြီးကိုသွားရမယ်”လို့ပြောပါတယ်။ ambulance လာခေါ်မှာပါ။ အမေ့ကိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ မကြောက်ဖို့ ရှင်းပြပေးဖို့ ကောင်းမွန်စွာ မှာပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူက quarantine ပါ၊ hotel ကို booking လုပ်၊ ပြီးတာနဲ့ ပို့မယ့်ကား ကိုလှမ်းချိတ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဖုန်းဆက်၊ပြီးရင် သူ့ကိုဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါဆိုတာနဲ့ အဲ့အမမှာတာတွေအကုန်တစ်ခုချင်းဆီလိုက်လုပ်ပါတယ်။ ရဲစခန်းကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ contact tracing လိုက်တဲ့အကိုကလည်း သွားချင်တဲ့ center ရှိရင်ပြောဖို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်း လိုတဲ့ဆေးတွေဝယ်ပေးပါတယ်။အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်။ မပြေတာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပါ။
၂။ သတင်းအမှားပေး၍ ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာအား သိက္ခာချ၍ ထိခိုက်စေခြင်း
မြို့နယ်ကျန်းမာရေးက ဆရာမလေးမှာတဲ့အတိုင်း အကုန်လုပ်ပြီး အမေ့အင်္ကျီအိတ်ကို အရင်ထည့်ပေးတယ်။ကျန်တဲ့လူကနောက်နေ့မှသွားရမှာမို့ ဘာမှမထည့်ရသေးပါဘူး။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက အပေါ်က ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီး ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
အမေ့ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပြန်ခေါ်ပါမယ်။ အစကနေ အကုန်ပြန်စစ်ပါမယ်။ ဖောင်ကြီးမသွားရပါဘူးတဲ့။
ညီမငြင်းပါတယ်။ အမေကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကုတင်လည်း မရ လူတွေလည်း အရမ်းကြပ်ပြီး သွေးပေါင်လေးတောင် လာမတိုင်း ရောဂါအခံရှိတဲ့ လူက ၂ရက် လောက် မအိပ်ရသေးလို့ မျက်လုံးတွေပြာပြီး အရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့အကြောင်း။ ဖောင်ကြီးဘဲတန်းသွားလို့ ရမလားဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ယဉ်ကျေးစွာမေးတော့ “ဖောင်ကြီးမှာလူနာတွေကို မကုပေးဘူး ဒီအတိုင်းပစ်ထားတယ် ဘာမှလည်း မလုပ်ပေးဘူး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာမှ ဆေးကုပေးတယ်၊ အဲ့တော့ဖောင်ကြီးမှာဘဲ သွားပစ်ထားမလား ဆေးရုံကို လာမလား ကိုယ့်ဘာကိုယ်တွေးပေါ့” (သူပြောတာဒီ့ထက်ဆိုးပါတယ် လျော့ပြောထားတာပါ) လို့ သတင်းအမှားပေး ပါတယ်။
ညီမထပ်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို လိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း positive ဆိုတာသေချာရင် ဖောင်ကြီးကိုဘဲ ပို့ဖို့ပြောပါတယ်။ သူကနားထောင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး အတင်းလုပြော နေရတာပါ။ မလိုက်ရင်ရဲခေါ်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းကိုချသွားပါတယ်။
ညီမတို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်လွန်းလို့ တောင်ဆေးရုံကြီးကိုကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ် သွားခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ အဲ့လိုခြိမ်းခြောက်စရာ ဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူး။
၃။ လူနာမိသားစုဝင်အား သိကပြောဆိုခြင်း
လာခေါ်မယ်ပြောပြီး ဖုန်းချသွားလို့ ချက်ချင်းပြန်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးရုံကြီးကိုလိုက်ရမဲ့ကားက ဘယ်အချိန်လာမှာလဲမေးလိုက်ပါတယ်။ အမေဘဲ ပစ္စည်းတွေထည့်ရသေးလို့ လူနာစောင့်လိုက်ဖို့လိုလား အရင်အစီအစဉ်အတိုင်း hotel quarantine ဘဲသွားရမှာလားလို့ မေးလိုက်မိပါတယ်။ အဲ့ဒါကို “လူနာစောင့် မလိုက်ဘဲ အမေကို ဆေးရုံမှာပစ်ထားပြီး hotel မှာ ဇိမ်နဲ့အေးဆေးသွား နှပ်ချင်နေတာလား” လို့ စော်ကားပြောဆိုပါတယ်။ (ညီမလျော့ပြောထားတာပါ သူပြောတာအဲ့ထက်ဆိုးပါတယ်)
ညီမမေးတယ်ဆိုတာ အရင်တစ်ခေါက်က ညီမလိုက်ချင်တာတောင် မလိုက်ရလို့ရယ် ပစ္စည်းတောင်မထည့်ရသေးလို့ သေချာချင်လို့မေးလိုက်တာပါ။ လိုက်ရမယ်ဆို လိုက်ကိုလိုက်မှာပါ။ လူတွေက စိတ်ရောလူရော အရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့လိုသိက္ခာချတဲ့စကားကို မပြောသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နေတာ ကိုယ့်အမေပါ အမေတစ်ယောက်လုံး ရောဂါဖြစ်လို့ စိတ်တွေပူပြီး ပင်ပန်းနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ရိုင်းစိုင်းစွာ အဲ့အတိုင်းပြောဆိုပါတယ်။
နောက် အကိုက covid consultant ကိုဖုန်းဆက်ပြီး အဲ့အတိုင်းလုပ်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လို လုပ်လိုက်လဲတော့ မသိလိုက်ပါဘူး။ ပြီးတော့မှ ဆေးရုံအုပ်က ဖုန်းဆက်ပြီး ဆေးရုံမလာရတော့ဘူး ဖောင်ကြီးကိုဘဲ သွားရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ညီမ ဟုတ်ဆိုတဲ့တစ်လုံးကလွဲပြီး ဘာစကားမှ ပြန်မပြောလိုက်နိုင်ပါဘူး။ အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်ပြီး ဟိုအမျိုးသမီးပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်အရမ်းဖြစ်သွားလို့ပါ။
ညီမတို့ positive လူနာကိုမှားယွင်းပြီး အိမ်ပြန်လွှတ်လိုက်တာ နားလည်ပေးလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့လူတွေအရမ်းများသွားလို့ မနိုင်တော့လို့ တစ်ချက်မှားသွားတာဘဲဆိုပြီး နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နားလည်လို့မရတာက positive ဆိုတာသေချာနေတဲ့လူနာကို ဘာလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ခြိမ်းခြောက်ပြီးအတင်း ပြန်ခေါ်တာပါလဲ? ဆေးရုံဆင်းလက်မှတ်ကို ပြန်သိမ်းပြီး အစကနေ လူနာမှတ်တမ်း အသစ်ကို ပြင်ရေးချင်လို့လား?
ဆေးရုံကြီးကဆင်းရင်တောင် positive ဖြစ်ရင် ကုသရေးစင်တာတွေကိုဘဲသွားရမှာကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘာလို့ လူနာကိုကြောက်လန့်အောင် ဖောင်ကြီးမှာ ဆေးမကုပေးဘူး ပစ်ထားတာလို့ ပြောတာပါလဲ? ဘာလို့ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေတဲ့ လူနာမိသားစုဝင်ကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီး စိတ်ထိခိုက်အောင်ပြောဆိုတာပါလဲ?
အခုအမေဖောင်ကြီးမှာပါ။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့မတူဘဲ အစစအရာရာ အကုန်အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရဲစခန်းကအစ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြို့နယ် ဆရာမလေး contact tracing လိုက်တဲ့အကို စတဲ့သူတွေအကုန်လုံးက အားပေးစကားပြောပြီး အဆင်ပြေအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကတော့ တော်တော်အဆင်မပြေပါဘူး။
← ကိုယ့်ဖက်က အကျအဆုံးများလာတဲ့ ကိုဗစ်အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲနဲ့ ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ စစ်မျက်နှာ
ကိုဗစ် အကူးခံရတာကို ထီပေါက်တာထက် ပိုပျော်နေရရှာတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက သံသယလူနာတွေရဲ့ ဘဝ →